Muuse Suudi, Maxamed Qanyare, Cusmaan Caato iyo Bashiir Raage oo ku dhawaaqay iney dagaal ku qaadayaan wadaadada diinta Islaamka oo ay cabsi ka qabaan in awooddii ay ku la hayeen Muqdisho ay kala wareegaan.
Buluugleey, February 18, 2006
Hogaamiye hooxyada Muqdisho ayaa maanta ku dhawaaqay iney dagaal la gelayaan wadaadada diinta Islaamka oo Muqdisho ka hirgeliyey maxkamado. Waxaa hadalkooda laga dhareemayey iney cabsi weyn ka qabaan awoodi ay ku lahayeen Muqdisho oo sii dhaceysa.
Hogaamiye kooxeedyadaas dantoodu ma ahan in ay la dagaalamayaan argagixiso, laakiin waxey rabaan iney ereygaas u cuskadaan dagaalka ay la gelayaan beelaha degan koofurta Muqdisho si ay u maqashiiyaan adduunka oo ay uga helaan kaalmo dhaqaale iyo mid aqoonsi.
Waxaa la xaqiijiyey in dhalinyaro fara badan ay isaga tageen maleeshiyooyinkii hogaamiye kooxeedyada, sidoo kale waxaa hogaamiyeyaasha gabaabsi ka galay dhaqaalihii ka soo geli jirey degaanada ay ka taliyaan iyo bulshada ku nool dibeda. Waxaa sidoo kale hor u socod la’aan ay la soo gudboonaatey siyaasadii hogaamiyeyaasha. Intaas oo dhan marka la isku geeyo, waxaa u soo baxday hogaamiye kooxeedyada in wakhti dhow wax walba ay ka wareegayaan gacantooda, ayna ku soo dhacayaan meel cidlo ah.
Muuse Suudi hadda ka hor wuxuu degmada Madiina ee Xamar ka furtay maxkamad Islaamiya oo uu dadka gacnaha iyo lugaha uga goyn jirey, maantana wuxuu dadka u sheegayaa inuu la dagaalamayo wadaadada sameeyey maxkamadaha.
Bashiir Raage oo aan ahayn nin diinta wax ka yaqaana ayaa maanta ku doodaya in diinta Islaamka ay mad-habta Shaafigu yahay diinta Islaamka saxda ah, tan wahaabiguna tahay mid qaldan. Bashiir wuxuu hilmaamay Islaanimadu iney tahay hal mid ah, madahiibta Islaamka oo dhana ay ku wada xiran yihiin Allaha abuurtay iyo nebigiisa Maxamed. Ujeedada Bashiir waa mid uu ku doonayo meel marinta ka ganacsiga wadaadada uu ka iibsado qolooyinka sirdoonka shisheeyaha, gaar ahaan Itoobiya iyo Mareykanka.
Maxamed Qanyare ayaa ku mashquulsanaa qaab looga baxo siyaasad xumada heysata hogaamiye kooxeedyada Muqdisho, wuxuuna dhinac ka talo qaatay Col. C/llahi Yusuf, dhinaca kalana wuxuu isku soo xirxiray diblomaasiyiin shisheeye oo uu ku howlanaa sidii ay uga kaalmeyn lahayeen mashruuc cusub oo uu doonayo inuu ka hirgeliyo Muqdisho, kaas oo ay doonayaan in hogaamiye kooxeedyadu ku muujiyaan awoodooda si ay u helaan tixgelin iyo in lagala arrinsado talada Muqdisho.
Kooxdan isbaheysatay danta ay doonayaan waa iney ku helaan dhaqaale ay ku howl geliyaan maleeshiyooyinkooda oo qarka u saaran iney kala tagaan, waxaa intaas daba taala la dagaalan qarsoon oo la soo qorsheeyey, kaas oo la doonayo in lagu wiiqo awooda beesha ugu weyn beelaha degan koofurta Muqdisho. Arrintaas oo ay ka soo shaqeeyeen Col. C\_llahi Yusuf, Itoobiya, Yemen, iyo wadamo kale oo arrinta kor ka indheynaya, aanse dooneyn iney si toosa ugu lug yeeshaan sababo la xiriira dhinaca amaankooda iyo danaha mustaqbalka ay ka leeyihhin Soomaliya.
Dagaalka ay ku dhawaqeen dagaaloogayaasha Muqdisho ma ahan mid ay dib ugu soo laba kacleyn karaan ee waa mid qasadka laga leeyahay uu yahay soo celinta dagaaladii beelaha degan Muqdisho. Hogaamiye kooxeedyada ayaa aaminsan in dagaalku uu yahay jidka ay yaqaanan oo ay ku soo ceshan karaan awoodooda ka sii dhaceysa taageerada dadweynaha Muqdisho oo aan u hayn wax sharafa.
Qanyare ayaa wuxuu ka shaqeynayaa inuu dib u soo nooleeyo dagaalkii waqooyiga iyo koofurta Muqdisho ka jirey, taas oo ah qorshe uu isagu qeyb ka ahaa oo la doonayo in Baydhabo ay sii ahaato xaruunta dowlada iyo baarlamaanka, arrintaas oo ah mid uu ku xumeynayo Geeddi iyo Maxamed Dheere oo uu doonayo rajada Jowhar in dowladu ku sii sugnaato mid meesha ka saarta. Qanyare ayaa rumeysan in haddii Xamar uu ka dhaco dagaal culus ineysan Jowhar heleyn nabadgelyo ay madax dowladeed ku sii joogaan.
Hogaamiyahaas waxaa qorshihiisa kula jira dad kala duwan oo danta isku keentay ay tahay xoolo sidii looga heli lahaa dowlada Mareykanka oo intooda badan ay gacan saar la la hayeen dhinaca sirdoonka. Dowladda Mareykanka lama dhacsana dagaaloogayaasha dhiiga dadkooda daadiyey oo u geysta dadkooda meelkadhacyada ugu foosha xun ee loo geysto xuquuda aadanaha, laakiin sirdoonka Mareykanka waa ay soo dhaweyaan adeegyada nimankaas ay ku doonayaan iney ku helaan xoolo iyaga oo u fulinaya danaha ay ku doonayaan in loogu soo gacan geliyo wadaniyiinta Soomaaliyeed oo ay ka tirsanayaan iney ka soo horjeedaan danaha Mareykanka.